भर्खरै विवाह बन्धनमा बाँधिएकी दीपिकालाई लाग्यो ठूलो झट्का ! - Online Palanchok
भर्खरै विवाह बन्धनमा बाँधिएकी दीपिकालाई लाग्यो ठूलो झट्का !
निर्देशक सञ्जय लीला भन्साली अभिनेता शाहरुख खान र सलमान खानलाई साथमा लिएर बनाउन लागेको नयाँ फिल्ममा नायीकाका रुपमा दिपीका पादुकोणलाई राख्ने भनिएको निर्णय परिवर्तन भएको छ ।
भर्खरै विवाहमा बांधिएकी दिपीका फिल्ममा खेल्न पाउने खबरले निकै उत्साहित भएकी थिइन् । तर उनको यो खुसी लामो समय टिक्न सकेन ।
खबरहरुका अनुसार भन्सालीको बिग बजेटमा बन्ने उक्त फिल्म दिलीप कुमार र राजकुमारको चर्चित फिल्म ‘सौदागर’ को कहानी जस्तै हुने बताइएको छ । जसमा सलमान खान र शाहरुख खान साथीको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । जुन मित्रता पछि दुश्मनीमा बदलिनछ ।
भन्सालीको उक्त फिल्मबाट दीपिकाको नाम हटाइएको छ । फिल्म निर्माताले अब उक्त फिल्मका लागि अभिनेत्री अनुष्का शर्मालाई अफर गरेका छन् । यसरी दीपिकालाई फिल्मबाट हटाउनुलाई सलमान खान कारण रहेको बताइएको छ । दीपिका र सलमान बिचको सम्बन्धका कारण यो अफर दीपिकाले गुमाउनु परेको खबर भारतिय संचार माध्यमहरुमा आइरहेका छन् । सलमान खानले यसअघि दीपिका पादुकोणलाई धेरै पटक फिल्ममा काम गर्ने अफर गर्दै आएका थिए ।
तर दीपिकाले सलमान खानको उक्त अफरलाई पटक पटक अस्वीकार गर्दै आइरहेकी थिइन् । सलमान खान स्वयम दीपिकालाई बलिउड फिल्म उद्योगमा डेब्यु गराउन चाहन्थे तर दीपिकाले डेब्यूको लागि अभिनेता शाहरुख खानको फिल्म ‘ओम शान्ति ओम’ लाई चुनिन् ।
यी सब कुराका कारण हो वा अन्य अरु नै कारण दीपिका पादुकोणले भने भन्सालीको फिल्ममा काम गर्ने मौका गुमाइसकेकी छिन् । अब अनुष्का शर्माले उक्त अफरलाई स्वीकार गर्लिन् वा नगर्लिन् त्यो भने केही दिनमा थाहा हुनेछ ।
Prevमलाई प्रदेश नम्बर एकका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले यौन शोषण गरे भन्दै मिडियामा आईन यी युवती (भिडियोसहित)
Nextफेरी आयो अर्को दुखद खबर, स्कुल पढ्न गएका १३ र १४ वर्षका दुई बालक भए बेपत्ता ? आखिर कहाँ गए ति बालकहरु ? तनावमा परिवार, प्रहरीको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो ?